KEDU IHE PING (PING) MA Ọ BỤ IHE MERE EGWUREGWU NETWỌK JI EGBOCHI? ESI EWELATA PING - DISK - 2019
Echere m na ọtụtụ ndị ọkachamara, karịsịa Fans nke egwuregwu kọmputa na netwọk (WOT, Counter Strike 1.6, WOW, wdg), chọpụtara na mgbe ụfọdụ, njikọ ahụ na-etinye ihe dị ukwuu: - nzaghachi nke ndị edemede na egwuregwu na-abịa n'oge na-adịghị anya mgbe bọtịnụ bọtịnụ gị; foto dị na ihuenyo ahụ nwere ike imegharị; Mgbe ụfọdụ, a na-agbagha egwuregwu, na-eme ka njehie. Site n'ụzọ, enwere ike ịhụ nke a na ụfọdụ mmemme, mana n'ime ha, ọ bụghị ọtụtụ ụzọ.
Ndị ọkachamara ahụmahụ kwuru na nke a na-eme n'ihi nnukwu ping (Ping). N'isiokwu a, anyị ga-atụgharịkwu anya na nke a, na ọtụtụ ihe gbasara ping.
1. Gịnị bụ ping?
2. Nso ke ping adabere (gụnyere egwuregwu)?
3. Olee otú ịtụle (mụta) ping gị?
4. Olee otú ị ga-esi belata ping?
M ga-agba mbọ ịkọwara m okwu nke m, dị ka m ghọtara ya ...
Mgbe ị na-agba ọsọ ọ bụla na netwọk, ọ na-eziga ozi (ka anyị na-akpọ ha ngwugwu) na kọmputa ndị ọzọ na-ejikọrọ na Ịntanetị. Oge nke ihe ọmụma a (ngwugwu) ga-erute kọmputa ọzọ ma azịza ya ga-abịakwute PC gị - a na-akpọ ya ping.
N'ezie, enwere obere ihe ọjọọ ma ọ bụghị okwu ndị dị otú ahụ, ma na ụdị okwu ahụ, ọ dị mfe ịghọta ihe dị mkpa.
Ee ala gị ping, ka mma. Mgbe ị nwere ping elu - egwuregwu ahụ (mmemme) amalite ịkụda, ị nweghị oge iji nye iwu, enweghị oge ịzaghachi, wdg.
1) Ụfọdụ ndị na-eche na ping dabeere na ọsọ nke Intanet.
Na ee na ee e. N'ezie, ọ bụrụ na ọsọ nke ọwa Ịntanetị ezughị ezu maka otu egwuregwu, ọ ga-eme ka ị daa mbà, ihe ngwugwu dị mkpa ga-abịa na oge.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ezuru Ịntanetị zuru ezu, mgbe ahụ, ị ​​ping ya adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere 10 Mbps Internet ma ọ bụ 100 Mbps.
Ọzọkwa, ya onwe ya bụ onye akaebe ugboro ugboro mgbe ndị dị iche iche na Ịntanetị n'otu obodo ahụ, n'otu ụlọ na n'ọnụ ụzọ, dị iche iche pings, nke dị iche n'usoro iwu! Ma ụfọdụ ndị ọrụ (n'ezie, egwuregwu ndị ka ukwuu), na-atụgharị na ọsọ nke Ịntanetị, gbanwere na onye na-ahụ maka Ịntanetị ọzọ, ọ bụ n'ihi ping. Ya mere nkwụsi ike na njikota nke nkwurịta okwu dị mkpa karịa ọsọ ...
2) Site na ISP - otutu na-adabere na ya (lee obere n'elu).
3) Site na ihe nkesa di n'ime.
Ka e were ya na ihe nkesa egwuregwu ahụ dị na netwọk gị. Mgbe ahụ, ping ya ga-abụ, ikekwe, ihe na-erughị 5 ms (nke a bụ 0.005 sekọnd)! Ọ dị nnọọ ngwa ngwa ma na-enye gị ohere igwu egwuregwu niile ma jiri mmemme ọ bụla.
Ma were ihe nkesa dị na esenidụt, na ping nke 300 ms. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke abụọ, ụdị ping ga-ekwe ka ịkpọ egwu, ma e wezụga n'ụdị ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, nzọụkwụ site n'ọzọ, ebe nnukwu ọsọ ọsọ anaghị achọ).
4) Site na ịrụ ọrụ ịntanetị gị.
Ọtụtụ mgbe, na PC gị, na mgbakwunye na egwuregwu ahụ, mmemme netwọk ndị ọzọ na-arụ ọrụ, nke na oge ụfọdụ nwere ike ibudata ma netwọk gị na kọmputa gị. Ọzọkwa, echefula na n'ọnụ ụzọ (n'ime ụlọ) ọ bụghị naanị gị na-eji Ịntanetị, ọ ga-ekwekwa na ọ bụ naanị ihe a na-agbanye n'ọwa ahụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ. M ga-enye ndị kachasị ewu ewu.
1) Iwu iwu
Usoro a bara uru iji mee ihe mgbe ị maara, dịka ọmụmaatụ, ihe nkesa IP na ịchọrọ ịma ihe ping na kọmputa gị. A na-eji usoro a eme ihe maka ebumnuche dị iche iche (dịka ọmụmaatụ, mgbe ịmepụtara netwọk) ...
Nke mbụ, n'ezie, ịkwesịrị imepe akara iwu ahụ (na Windows 2000, XP, 7 - a ga-eme nke a site na menu "START" Na Windows 7, 8, 10 - pịa njikọta nke bọtịnụ Win + R, wee dee CMD na windo nke meghere ma pịa Tinye).
Na-agbanye akara iwu
N'ime akara iwu ahụ, dee Ping ma tinye adreesị IP ma ọ bụ aha ngalaba nke anyị ga-atụle ping, wee pịa Tinye. Lee ihe atụ ole na ole nke esi ele ping:
Nkezi ping: 25ms
Dị ka ị nwere ike ịhụ, nkezi ping oge Yandex sitere na kọmputa m bụ 25 ms. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ping dị na egwuregwu, mgbe ahụ, ị ​​ga-adị jụụ na-egwu egwu na ọ nwere ike ọ gaghị enwe mmasị na pinging.
2) Ez. Ọrụ Ịntanetị
E nwere ọtụtụ saịtị pụrụ iche (ọrụ) na Ịntanetị nke nwere ike ịlele ọsọ nke njikọ Ịntanetị gị (dịka ọmụmaatụ, nbudata ọsọ ọsọ, ebufe, yana ping).
Ọrụ kacha mma maka ịlele Ịntanetị (gụnyere ping):
Otu n'ime saịtị a ma ama maka ịlele àgwà nke Ịntanetị - Speedtest.net. Enwere m ike iji, nseta ihuenyo na ihe atụ dị n'okpuru ebe a.
Nlereanya ule: Ping 2 ms ...
3) Lelee ihe ndị dị na egwuregwu ahụ n'onwe ya
A pụkwara ịchọta ping ozugbo na egwuregwu n'onwe ya. Imirikiti egwuregwu enweela ngwaọrụ ndị e wuru iji chọpụta àgwà njikọ.
Dịka ọmụmaatụ, na WOW ping gosipụtara na obere windo dị iche (lee Latency).
193 ms bụ ping dị elu, ọbụna maka WOW, nakwa na egwuregwu dị ka ndị na-agba ụta, dịka CS 1.6, ị gaghị enwe ike igwu egwu ma ọlị!
Ping na egwuregwu WoW.
Ihe atụ nke abụọ, onye na-agba egwu egwu Counter Strike: na - esote ọnụ ọgụgụ (isi, mmadụ ole gburu, wdg.) Igosi Latency gosiputara na n'ihu onye ọ bụla ọkpụkpọ bụ ọnụ ọgụgụ - nke a bụ ping! N'ozuzu, n'egwuregwu ndị dị otú a, ọbụna obere uru na ping nwere ike inye uru bara uru!
Ọ dị adị? 😛
N'ozuzu, n'Ịntanet, e nwere ọtụtụ ụzọ isi belata ping: enwere ihe gbanwere na ndekọ ahụ, gbanwee faịlụ egwuregwu, ihe iji dezie, na ihe ndị ọzọ ... Ma n'eziokwu, ụfọdụ n'ime ha na-arụ ọrụ, Chineke na-egbochi 1-2%, ọ dịkarịa ala Anaghị m anwale oge m (ihe dịka afọ 7-8) ... N'ime ndị niile dị irè, m ga-enye ụfọdụ.
1) Gbalịa igwu egwu na ihe nkesa ọzọ. O kwere omume na na nkesa ọzọ, ping gị ga-ebelata ọtụtụ ugboro! Mana nhọrọ a anaghị adabara mgbe niile.
2) Gbanwee ISP. Nke a bụ ụzọ kachasị ike! Karịsịa ma ọ bụrụ na ị maara onye ị ga - aga: ma eleghị anya ị nwere ndị enyi, ndị agbata obi, ndị enyi, ị nwere ike ịjụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ụdị ping dị otú a, nwale ọrụ nke usoro ihe omume dị mkpa ma gaa na ihe ọmụma nke ajụjụ niile ...
3) Gbalịa ime ka kọmputa dị ọcha: site n'ájá; site na mmemme ndị na-adịghị mkpa; ebuli ndekọ ahụ, mebie diski ike; gbalịa ịgba ọsọ ahụ. Mgbe mgbe, egwuregwu ahụ anaghị adaba naanị n'ihi ping.
4) Ọ bụrụ na ọsọ ọsọ n'Ịntanet agaghị ezuru, jikọọ na ọnụ ọgụgụ dị ngwa karị.